Fivoriana sy minitra | Holmbygden.se
Indro fa ho hitanao protocols sy ny vaovao momba ny fivoriana.
Ny protocols azy dia voavonjy ao “-format PDF” na “teny-format” ary misokatra amin'ny varavarankely vaovao rehefa mikitika azy. Raha te-haka ny antontan-taratasy, tsindrio marina sy mifidy “Save Target Rehefa…” (na ny mitovy eo amin'ny navigateur).
Raha hamaky PDF antontan-taratasy ilainao
ny Acrobat Reader (misintona eto).
HBU F / T iombonana amin'ny fivoriana
120313 Minitra ny Fivoriana fanao isan-taona (tsy nanitsy).fanononana
Idea Holm fivoriana ho velona Holm
Wind turbine natao ambanivohitra vola Holm maso ho an'ny mponina. No foana in mifandray aminy sy manaiky, ankoatra ny hafa. lalana ho any Nötåsen nisoroka. Fametrahana Ireo andry tokana harodana sy ny fanorenana tamin'ny Febroary ho avy. Ny raharaham-barotra dia afaka miandry fikambanana sy ho hitantsika izay fikambanana amin'ny teny sahaza indrindra mba hahazoana vola fanampiana ambanivohitra. Ny fandraisana anjara dia ho soa na inona na inona ny distrika iray manontolo.
Information momba ny zava-misy miaraka amin'ny Senior Home sy Mpampianatra ny Housing.
Tommie teny amin'ny Björn Nordling – Mittlandia ho avy ny olona hiresaka momba ny Mpitarika tetikasa (tany Bygdsiljum bidrag). Izy tsy afaka nanatrika androany. manandrana indray.
– Niklas misedra teo aloha liana, Janne, ny rakitra soa, maneho ny mahaliana.
Previous fivoriana: Inona no mitranga any an-tsekoly amin'izao fotoana izao?
Mpitantana Hans-Olof milaza fa manam-Sandström niresaka rehetra ray aman-dreny (no tsy - tsy Patrik ohatra) ary ny olona rehetra dia nankasitraka ny manana ny ankizy ao Liden. An-toerana ireo Hiresaka bebe kokoa momba ny olana.
Previous fivoriana: Moa Österström fikambanana distrika sisa? Moa ve izany ho fanaovana fanatanjahan-tena in Österström?
Tsy misy toerana antoko mijanona amin'izao fotoana izao. Billy hamiravira avy nedervåning, dia ho zavatra ilaina manokana, Trano nomanina any ivelany - ho an'ny rehetra Holmbor. Fanazavana bebe kokoa momba Holmbygden.se/foreningar/osterstroms-bygdegardsforening/.
Bagarstugan hitoetra amin'ny iombonana amin'ny ho fanofana.
Previous fivoriana: Afisy sy sary momba ny vohikala sy ny fivoriana dia hatao ka nataony tao mailboxes manodidina ny Holm. Afisy sy sary voasoratra amin'ny Niklas, naniraka tany amin'i Patrik amin'ny Anders ("Nanofa Buddy") Tafatoetra ny fanontam-pirinty manontolo 500st. Afisy sy sary manana 121121 Efa nozaraina avy ny fotoana Gimåfors ho Anundgård. Ingela, Kent Å, Catarina sy Kent manome bebe kokoa hitoriana N.
Previous fivoriana: Miantso in Holm! Tsy maintsy miezaka mampiasa izay no ao an-tanàna amin'izao fotoana izao ny zavatra ilaintsika. Niklas dia nanao sonia ny Afisy sy sary, izay efa / hozaraina.
Previous fivoriana: Afaka manamboatra ny ana-panahy ataony amin'ny Sjöändan ny fitsangatsanganana amin'ny fihaonan-dalana, mba Holmsjön.
Catarina / Kent tsy nahazo mihazona ny mifanaraka Transport Agency, dia hiverina. Na izany aza, tsy afaka mahita ny farihy ... no tena tsara fa ny ala antoko ankavia?
Previous fivoriana: Inona no miaraka solika paompy. Alexander Toa te-hanary ny paompy? Efa niresaka tamin'i PEMA for refueling. Tsy toa tahaka ireo te-haka ny "tobin-tsolika". Tsara raha misy olona / fikambanana te-handray ny. Tanàna famoronana fikambanana / fiaraha-miasa? Mora kokoa mba hahazoana vola fandraisana anjara toy ny. Inona ny paompy no amin'izao fotoana izao? fahefana, kortautomat m.w.?
Janne homarinana avy amin'ny teny amin'i Alexander ny fomba miasa ankehitriny:
Marina fa i Aleksandra te hanaisotra azy io. Te ho, na izany aza, mivarotra vata fampangatsiahana, compressors, sns. raha ny paompy. Niresaka izahay isan-karazany ihany koa ny safidy.
Ohatra ny takeover dia avy Sollerön, Dalarna. Ny modely ho antsika?
Jereo ny fomba efa natao tany amin'ny protruding notch mpanolotra sy Sörbygden?
Kent maso bebe kokoa amin'ny PEMA ...
Previous fivoriana: Thomas manamarina amin'ny Ljustorp ny fomba mihazakazaka ny paompy sy ny fivarotana ao amin'ny modely iombonana.
Niresaka tamin'ny mpiara-miasa teo aloha, ny tanàna fikambanana manana ny toeram-pivarotana rehetra ny fitaovana (vata fampangatsiahana, kyl sns). Ary samy nandriatra avy ny mpandraharaha izay mitantana azy. Eto in Holm, ny toe-javatra kely hafa tsy miankina amin'ny tompon'ny fananana, dia te-hivarotra vata fampangatsiahana O anaty vata fampangatsiahana raha tobin-tsolika.
Ambany Payroll hetra in Holm nandritra ny orinasa p.g.a. ny any amin'ny faritra fanohanana (fito, sidina sy ny taxi fitaterana). Janne efa nirona teo aloha in Taxi asan'ny fanahy. Niklas manoratra amin'ny orinasa ao amin'ny vohikala mba handrisika ny fandraharahana in Holm.
ny horonan-taratasy in Stugun aloha ... 4 haingana toy, taona taorian'ny 125 haingana toy. Fifaninanana toy izany dia tokony ho afaka miasa eto amin'ny, indrindra fa ny vaovao tsara ramps manodidina ny farihy.
Mila mahazo kokoa ny vaovao tsara ao amin'ny taratasy sy ny aterineto Holm.
TV sarimihetsika natao Bao in vanin-taona mafana. misy?
700 € amin'ny nivezivezy sy ny sambo M.M.. avy any Polonina.
ny. rivotra: Cable no notarihana ho Lövåsen avy Liden. Fiara mifono vy azo fanitarana amin'ny ho avy dia. Nanorina Peng diskuterades.
EULOS no nalaina nandritra ny tetikasa avy any Vinbolaget.. Tsy misy mizara ho lafo. EULOS manana tombontsoa mba nifandray mivantana ny mponina sy hanome antsika byapengen mivantana tsy misy mpanelanelana ny kaominina toy ny. Ataovy azo antoka fa miara-miasa, fa tsy hifaninana eo amin'ny fikambanana in Holm.
Tsy ho be fanoloran-tena amin'izao andro izao mba hitandrina ny mitondra ny scooter. Ve ny olona no tsy niakatra ka mandehana snowmobiling ao amin 'ny halehiben'ny. Mampalahelo fa.
fialam Tips! Skating rink izao Lillsjön ary Anundgård Lake.
Tsy maintsy ho fankalazana ny Lucia 13:f ao Am-piangonana.
Julaktion ny paroasy trano in tapa-bolana. Na Info bebe kokoa momba ny fiarovana ny loza ao an-backwoods. Fisamborana Cardiac (SOS mpandraharaha manapa-kevitra) lozam-piarakodia, afo sy drano (RTJ anatiny didy manapa-kevitra) mifandray amin'ny alalan'ny SMS ao amin'ny backwoods. (Ljustorp, Holm, Överturingen, North Hazel sy Magpie fitsarana tianao).
Heico Basten, hitoetra ao mpanolo-tsainazavatra ilaina in Stöde (Tany am-boalohany avy any Holandy), Niresaka momba ny orinasa sy ny fahafahana Destis. Driver ho fanohanana ny fiaraha-miasa ny distrika iray socalled. Leaderprojekt. Ny fiangonana dia ny tetikasa izay. 2 ny fianakaviana no nifindra ho any, 3 fam. dia mikasika ny, 1 ho an'ny. VarVar mpifindra monina p. ny. avy amin'ny vondrona Eoropeana:ny fifindra-monina lehibe indrindra fampirantiana in Holland, toerana, communities.IT fahaiza-manao ilaina amin'ny Sundsvall. Maro no te-hiasa amin'ny tanàna, fa mitoera any ambanivohitra. Ny lavitra ny tanàna misy olana eo amin'ny raharaha. Tsy mba toy ny maro ny mitantana ny hivarotra ny trano ankehitriny Holland, fa mila asa maro. Ny attraction dia voajanahary sy ny fiaraha-miasa amin'ny Heico livskvalitét.Ett sy ny namany, Destis hitondra soa ho an'ny Holm. Famatsiam-bola no ilaina, na izany aza,. Ny Mpitarika azo nanomboka tetikasa. Mitaky fanoloran-tena ny hitandrina ny. Björn Norling, Mittland, afaka hilaza aminao ary mahafantatra bebe kokoa ny fomba fiasan'izy.
ho azo antoka iray avy isam fikambanana ho amin'ny fivoriany manaraka.
HBU F/T – Holmbygdens Utveckling Företagand och Turism – Erica Forström (Janne fifandraisana)
Holm ny Sports Club - Homenao Eliasson (Thomas fifandraisana)
Holm ny eo an-toerana History Society - (Thomas fifandraisana)
Draka Ny tendrombohitra snowmobile Club - Motorcycle sy Snowmobile - Jan-Erik Nilsson (Kent)
Ohb Holm - Staffan Andersson
Vike mitady tombontsoa ara-barotra fikambanana - Holger Sahlin (Max)
Österströms Bygdegårdsförening - Carina Hultman (AVY?)
Filan-kevitry ny Fiangonana - Ulla Grelson (AVY?).
Next Date 5:Desambra amin'ny 19:00, Församlingshemmet. Gunilla hijery izay azonay atao hisambotra an-tsekoly, -tsy Församlingshemmet. Gunilla jereo raha afaka ny ho any an-tsekoly, -tsy Församlingshemmet. Niklas manambara ny fihaonana manaraka ao amin'ny vohikala sy amin'ny alalan'ny e-mail.
Ny sekoly amin'izao fotoana izao? Ankoatra izany, ny mipetra-potsiny amin'izao fotoana izao p.g.a. mpampianatra izay tsy hita. Amin'izao fotoana izao, ny tsy fisian'ny zaza fototra na izany aza, no mahatonga izany arguably ny skolort tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Ny fantatsika dia ny hoe ilaintsika ny ankizy bebe kokoa (!) hitandrina ny sekoly nifamoivoy sy ny kalitao.
Tokony hiezaka hahita "ny zavatra" any Holm. Angamba iray faritra tery amin'ny mombamomba anay, ary koa oh. Näsåker manana Urkult andro firavoravoana, ary mametraka ny distrika eo amin'ny sarintany.
Tokony ho tsara kokoa amin'ny miasa manohitra ny tanjona iombonana ny tanàna, dia miteraka cohesion in Holm.
Afaka handamina ny isan-taona byafest miaraka amin'ny fifantohana somary tery. T.ex. in countryfestival.
Afaka ny ririnina fandaharana ho zavatra? Get be atao daty, ny fotoana ny taona, Tsy toy ny vanin-taona mafana. Hevitra fa.
Holm Cup araka izay nisintona vitsy ny olona - indrindra mpilalao. Aleo miaraka lilla Holm Cup, maro ny ray aman-dreny. Na izany aza, dia mifaninana amin'ny hafa kaopy. Boules fifaninanana natao nandritra ny vanin-taona mafana mpitsidika miasa soa sy ny fampiasana ny sakafo maivana bara.
Moa Österströms fikambanana distrika sisa? Moa ve izany ho fanaovana fanatanjahan-tena in Österström? Checked ny fivoriana manaraka.
En del vet fortfarande inte om Holmbygden.se. Afisy sy sary dia tsy maintsy atao, ary nataony tao mailboxes manodidina ny Holm. Flyer mba ho i syfte att marknadsföra Holmbygden.se och nästa möte. ireo nametraka in mailboxes.
Tena efa nifindra tany amin'ny Deep Sodina Mahaliana. Ahoana no? Ny olona dia tokony ho tia Holm distrika amin'ny ankapobeny ihany koa.
Miantso in Holm! Tsy maintsy miezaka ny mampiasa ny zavatra miaraka amin 'ny tanàna amin'izao fotoana izao ho an'ny zavatra ilaina, t.ex. mpandrafitra, karipetra sosona, mpanao hosodoko, Österströms Estate. Företag finns på Holmbygden.se/foretag. More dia tonga soa ny ampiana izany toerana maimaim-poana! Dia skrivaa amin'ny Afisy sy sary.
Bao no karamaina tao an-tanàna ary efa nahafinaritra eto. Dia izao ahemotra ho any Polonina, fa mahaliana ny hijanona ao Holm. Ny vaovao dia hifindra ao amin'ny misy ankehitriny. Misy ilaina ny ho mora kokoa ny manofa in Holm. Ny hahatonga ny olona haniry ho any amin'ny dingana tatỳ aoriana hiaina mandrakizay eto.
Misy foana ny filaharana, ary misy foana ny mahaliana ny hifindra ao amin'ny "The vaovao manaova". Misy ilaina ny fanofana trano. Too ratsy ny "Senior an-trano" sy ny "Mpampianatra ny Housing" dia sy fitantanana.
afaka isika manamboatra ny nasty fitsaharana amin'ny Holmsjö Butt amin'ny fihaonan-dalana miaraka amin'ny fomba fijery ny Holmsjön - "Gateway ho Holm". Miresaha amin'ny departemantan'i ny fitaterana raha ekena ny hanitarana ny sampanan-dalana izay efa tena maro misy. Afaka mahazo anjara izany avy amin'ny governemantam-paritany. Ny fijerena ny Traffic Authority ny fahafahana ho an'ny fivoriana manaraka.
Tsy misy zavatra mivaingana efa manodidina Affär'n amidy. Mpandray anjara ireo, na izany aza,, fa na inona na inona tonga ny tifitra.
Ny toerana misy ny solika resahina paompy. Alexander te-hitandrina izany, na mila olona hafa hikarakara azy? Kollas ho amin'ny fivoriana manaraka.
Tokony hiresaka Ljustorp momba ny fomba mihazakazaka ny paompy sy ny fivarotana ao amin'ny modely iombonana. Mijery ny fifandraisana in Ljustorp for Nostalgia fihaonana.
HBU’s dokumentsamling (ny tale)
1. Midira ao amin'ny Google Drive amin'ny Google kaonty.
2. Dia tsindrio eo amin'ny “Nozaraina tamiko” tamin'ny ankavia mba hahitana ny fampirimana HBU.
Tsy miditra! Nanjavona Google kaonty!
Moa ny mailaka Gmail anao hatrany manana kaonty Google. Raha toa ka tsy manana izany, gör ett Google konto här, maka ihany 2min!
dia tsindrio “Aleoko mampiasa ny adiresy mailaka amin'izao fotoana izao”, dia afaka mampiasa ny adiresy mailaka amin'izao fotoana izao ho toy ny kaonty Google tsy famoronana vaovao adiresy Gmail.
9/12: Utah: fampitandremana kilasy 1, orampanala, V ... I de västra delarna, under morgonen... hamaky bebe kokoa